Risk Administration Services Inoita Inokurumidza Dhata Kuendesa uye Rusununguko Kugadzira - Motio
Jan 1, 2019Case Studies, inishuwarenzi, Soterre
Risk Administration Services ikambani inokurumidza kukura 'inishuwarenzi kambani inoshandira iyo yekumusoro midwest, mapani makuru, uye kumadokero matunhu eUS
Nekuitwa kweQlik Sense kuRAS, madhipatimendi mukambani yese sekutengesa, kushambadzira, mari, kudzora kurasikirwa, zvirevo, zviri pamutemo, uye E-kudzidza zviri kuita shanduko yetsika nedata. Ivo vari kuwana ruzivo nekukurumidza uye nekuishandisa zvizere kuti vaongorore uye vagadzire marongero.
Apo Risk Administration Services (RAS) uye ivo Chief Information Technology Officer Chirag Shukla pavakatanga rwendo rwavo rwehungwaru hwebhizinesi, ivo vaiziva kuti vaida chishandiso chinoenderana nekuona kwavo kwenguva refu kwekukura. Kusvikira panguva ino, Excel maspredishiti uye mishumo kubva kune iripo BI chishandiso yakange yashandiswa zvakanyanya mukati mekambani, asi kwete pasina miganho. Izvo zvakave zvakaoma kupepeta kuburikidza nemapeji akawanda-peji reruzivo iro raizonyanyo shandiswa uye kutsanangurwa kuburikidza nekuona.
“Shanduro yeshanduro inotipa chivimbo ichocho tichiziva kuti chero shanduko dzinoteverwa uye tinokwanisa kudzoka zviri nyore. Izvi zvinotungamira mukuvandudza. Izvi zvinoita kuti titore zvisarudzo neushingi. ” - Chirag Shukla, CTO kuRAS
Qlik Sense Yakashandurwa RAS
Nekudaro, ivo vakatanga kushopota vachitenderedza uye vachifananidza misika-inotungamira maturusi eBI vasati vafunga nezve Qlik Sense. "Takaona kuti Qlik chimwe chezvinhu zvinokurumidza zvekuona maturusi, kwete kungokudziridza chete asiwo kuongorora," akadaro Chirag Shukla. Mushure mekushandisa Qlik Sense mumaawa asingasviki maviri, vakaona kuti nekutsiva mishumo yeBI nemadhibhodhi, kushandiswa kwedata nekuverenga zvakatora 180. Vashandisi vavo vemunharaunda vakabva pakudhinda data kunge kamwechete pasvondo kusvika kamwe paawa.
Asi Zvakadii NeKuchinja Management
Kunyangwe Qlik Sense madhibhodhi akachinja nzira iyo RAS yaipedza data, pakanga paine mamwe matambudziko nekuchinja manejimendi. Pakutanga, ivo vakaedza manyore kunyora shanduko iyo yakakurumidza kuve yakaoma kunzwisisa. Vakanga vachiona zvichinyanya kuoma kuona mafomura (semuenzaniso huwandu hwepakati, hushoma / huwandu, nezvimwewo) zvainge zvachinja pakati pezvinyorwa uye vaiziva kuti vaida mhinduro nekukurumidza. Chimiro chavo chekutanga chaive chekushandisa API kubata zvinyorwa zvekutakura asi sezvo vanga vava dhibhodhi-centric kambani nekutenda kuQlik, ivo vaive vachiri murima nezvekuti mawonerwo iwoo akange achinja sei. Pasina kutaura, kuenderera mberi kwekuzorodzeka kwedata kwakatungamira kumibvunzo mizhinji pamusoro payo mukati mebazi ravo rezvemari, zvichikonzera Chirag neboka rekusimudzira reBI kuyambuka kuburikidza nebasa remushandisi kuitira kuti vaone kuti nguva, kupi, uye sei zvinhu zvachinja.
Iyi nzira isinganetsi yekuferefeta yakazovaunza kumubvunzo, "Sei tiri kuzviitira isu pachedu? Panofanirwa kunge paine software inokwanisa kukwanisa kuita izvi uye panofanira kunge paine vanhu pamusika, ”akabvunza Chirag. Panguva iyi ndipo pavakatanga kutsvaga mhinduro yesoftware yaizovapa iyo vhezheni yekudzora kugona kwavanoda zvakanyanya. Mauya, Soterre.
Ryan Buschert, mumwe wevakuru vanogadzira Risk Administration Services anga achipinda musangano wegore negore waQlik paakawana software mhinduro yavainge vachitsvaga. Pfungwa ine bara pamusoro pechigadzirwa chiri kukwanisa kuendesa chidimbu chechikumbiro pachinzvimbo chechinhu chose chakabata ziso rake nekuti kusvika panguva iyoyo yaakange akashandiswa kuendesa "kwese kana kusipo". Paakaenderera mberi nekuferefeta akakurumidza kuona kuti iyo imwechete software iyi yaisanganisira zvaida RAS; vhezheni yekudzoresa chimiro cheQlik Sense. Iyo dumba yaive Motio uye chigadzirwa chacho Soterre.
Uyai Neiyo Shanduro Kudzora
nekuisa Soterre yaikurumidza uye isingarwadzi, uyezve, yakashanda pamwe chete neQlik Sense chikuva chavaive vaziva nekuchida. Izvo zvakawedzera kuwedzera kuti kuwedzerwa kwe Soterre yaizopa akawanda mabhenefiti, mamwe ari pachena, uye mamwe asingatarisirwi zvachose. Kutanga, zvakakurumidza kumhanyisa kugona kwavo kuongorora, zvichiita kuti shanduro isashande. “Zvakanaka kuva nazvo ipapo sedziviriro saka kana tichida kumhanyisa chimwe chinhu nekukasira isu tinokwanisa, tese tisingafanirwe kuverenga zvinyorwa zvinodzorwa neshanduro kuti tione kuti chii chakashanduka uye nguvai. Iye zvino tinogona kungonongedza, tinya, uye tiwane mhinduro. Nguva yatinenge tichichengetedza zvikamu zvine huchenjeri hwakawanda, ”akadaro Ryan.
ne Soterre panzvimbo, dhipatimendi ravo rezvemari rakanga risingachafaniri kunetseka nezvehunhu hwe data, izvo zvakatungamira mukushomeka kushoma uye mibvunzo. Izvo zvakatombochinja mashandisiro anoita Ryan budiriro pachayo. "Dai ndanga ndichiita shanduko huru tisati tambo Soterre, Ndinogadzira kopi ndisati ndachinja kuitira kuti ndikwanise kudzokera, asi izvozvi handichadi kuzviita, ”akadaro Ryan.
Kukwikwidzana Kwedenga Nekuongorora Hunhu
Risk Administration Services iri kuramba ichikura uye zvichidaro, inogara ichitsvaga nzira dzekuvandudza nekuwedzera kukura mukuteerera kwesangano. Sekambani yeinishuwarenzi, zvese zvemukati nekunze ongororo zvakakosha zvakanyanya. Soterre inopa RAS makwikwi ekukwikwidza mune ino domeini nema kutonga pamusoro peiyo budiriro yehupenyu kutenderera. Vanogona kukurumidza kukwevera Qlik kuratidza maitiro avanoongorora zvemukati pamwe ne Soterre iyo inorekodha chero shanduko, ndiani akachinja, uye riini, zvichingodaro.
"Kuteerera-kuchenjera, Soterre ichatipa makwikwi. ”
Chipo Chisingatarisirwi - Kugadziridza
Kunze kweiyo vhezheni yekudzora kugona Risk Administration Services saka yaishuvira zvakanyanya, yakavapa mamwe mabhenefiti asingatarisirwe futi. Bvunza chero munhu kubva kumamiriro ekuvandudza uye ivo vanokuudza iwe kuti chakakosha sei chimwe chinhu senge vhezheni yekudzora zvechokwadi iri. Izvo zvakakosha mukuti zvinoita kuti hupenyu hwemugadziri huve nyore, asi zvakaenzana kukosha kuvimba kwainopa munhu ari kuishandisa. Kuna Chirag nechikwata, zvakavapa chivimbo chekuita sarudzo dzakashinga vachiziva kuti zvese zviri kutevedzwa, uye kana vachifanira kudzoreredza chaive chinhu kunze kwekungobaya chete.
Kuvimba kutsva uku kwakatungamira mukushinga kuita sarudzo, izvo zvakazotungamira mukuwedzera kwehunyanzvi nekuti kutya kwekukanganisa kwainge kwabviswa. Uku kuwedzera kwechimbichimbi kwehunyanzvi-hunotungamirwa hunyanzvi hunotsigira zvakakwana zvinangwa zveRAS mune ramangwana sezvavanoramba vachiwedzera.
RAS inoita 180 izere nekushandiswa kwedata
Qlik Sense madhibhodhi akurumidzira kuendesa kweruzivo kuRAS ichivagonesa kupeta katatu data rayo.